Sababaha keena dhibaatooyinka dhallinyarada ku heysta dalka gudihiisa & dibadisa – War La Helaa Talo La Helaa
DEG DEG: Jubbaland oo ku dhawaaqday dagaal ka dhan Farmaajo.
DF oo guul ka gaartay barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya.
Jubbaland oo soo saartay go’aan cusub
Kheyre oo shir guddoomiyay kulan loogu hadlaayay amniga iyo dagaalka Al Shabaab
FIIRSO heesta Cajiinley oo 2 bil gudahood Malyan jirsatay
FIIRSO MUUQAAL: Cali Maxamed Geedi oo Farmaajo uga digay inuu mudo kororsi sameeyo
DEG DEG+FIIRSO: Xiisad ka dhex taagan DF & Ahlu suna & Dhuusamareeb oo aag…
TALEEX: Nin ku xadgudbay haween badan oo lagu dhigay taariikh lama ilaawaan ah
FALLO KOOBAN GACAL IYO GAYAAN W/Q:- Xasan Cabdulle Calasow Shiribmaal
JAMAL OSMAN: Weriye ka habaabay mihnadda Saxaafadda oo ku kor dhacay siyaasadaha…
Asaasaha ururka Al-Shabaab halkee buu ku sugan yahay?
DEG DEG+FIIRSO: DF oo Xoogeeda isugu geyneysa arrinta Jubbaland si ay uga guuleysato…
Sababaha keena dhibaatooyinka dhallinyarada ku heysta dalka gudihiisa & dibadisa
By Jabra Shaaciye	 Last updated May 23, 2019
Yusuf Yuusuf Abraar oo horay dalka uga soo qabatay xilal kala duwan oo ku sugan dalka Kanada ayaa markii ugu horeysay ka warbixisay xaaladaha heysta dhallinyarada Soomaalida ee ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Waxay sheegtay in dhallinyarada joogta dalka gudihiisa ay heystaan duruufo niyad jab miiran ah, iyadoona sheegtay in dhallinyarada marka ay wax bartaan oo ay ka soo baxaan jaamacadda aaney heleynin wax shaqo ah taasina sababtay inay dalka ka tahribaan.
“Dhallinyarada iskuulka ayay ka soo baxayaan, jaamacadda marka ay dhameeyaan shaqo ma jirto markaasina waxaa ku dhacaya mooraal jab” ayay tiri Usur Abraan oo khudbad ka jeedineysay munaasabad uu soo qabanqaabiyay ururka RAJO oo ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida dalkaasi Kanada.
Haweeneydaan oo iyadu si dhow ula socota xaaladda Soomaalda ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa sheegtay inay iyadu u kuur gashay asbaabaha keena dilalka dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kanada degan.
“Waxaan la kulanay Booliska dalka Kanada, waxaana su’aalay sababta keeneysa dilalka dhallinyarada dalkaan joogta, arrin aan fileyn buu igu yiri, wuxuuna yiri waxaa keenaya rajo xumada Soomaaliya” ayay tiri Yusuf Abraar.
Saraakiisha Booliska Kanada waxay sii raaciyeen hadalkooda inay diiwaan geliyeen arrimo dhowr ah, marka ay dhibaatada geysanayaan dhallinyaradana waa marka ay war xun ka maqlaan dalkooda.
XOG+FIIRSO: Halkuu ka yimid Ninkii isku qarxin rabay Guraceel ee gacanta lagu dhigay?